M.A.D 8 – သင်ယူနိုက်တက်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များဆန့်ကျင်မစ်ရှင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သူရဲကောင်းများ၏ကစားသမားများနှင့်အရိပ် Tech မှလက်နက်များမှာထား၏ရှိရာတစ်ဦးကဒိုင်းနမစ်နှင့်ပြင်းထန်သောအသစ်သောလှုပ်ရှားမှု RPG ။
ဤသည် RPG ပြင်းထန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှု, ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းများနှင့်စုစုပေါင်းပရမ်းပတာပတ်ရစ်နည်းပညာမြင့်လက်နက်များကိုကယ်တင်တတ်၏!
8 သူရဲကောင်းများနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှု RPG ▶◀
သငျသညျအဘယ်သူမျှမယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်သင်၏သူရဲကောင်းများအပေါ်မူတည်ရန်ရှိသည်။ ညီညွတ်သောအစိုးရတပ်ဖွဲ့များဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ခရီးအတွက် 8 သူရဲကောင်းများစုဆောင်းနှင့်တိုး။
▶ Dynamic နှင့်ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှု! ◀
အသုံးချရိပ် Tech မှ▶◀
သင်ထက်ပိုကြီးပြီးပိုအစွမ်းထက်ရန်သူချယူလိုလျှင်စမတ်ရဖို့ရှိသည်။ အရိပ် Tech မှအစီအစဉ်၏လက်နက်များသင်၏ရန်သူတို့ကိုတိုက်ဖျက်ကူညီပေးပါမည်နှင့်သင်သည်သင်၏သူရဲကောင်းများအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ သုတေသနနှင့်သင့်ရိပ် Tech မှလက်နက်များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင့်မစ်ရှင်တခုတခုအပေါ်မှာအစွန်းရ။
သငျသညျကိုသာတိုက်ပွဲမြေပြင်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ရိပ် Tech မှလက်နက်များယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဘုံသူဌေးကချယူခြင်းအခြားကစားသမားတစ်လျှောက်တွင်စစ်တိုက်ခြင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တိုက်ပွဲမြေပြင်မရှိသစ္စာရှိမှုရှိပါတယ်, အရမ်းဖော်ရွေမရကြဘူး!
သည်အခြားတပ်မှူးများနှင့်အတူ PvP တိုက်ပွဲ▶! ◀
သင့်ရဲ့အစွမ်းအစအရှိဆုံးသူရဲကောင်းများနှင့်အရိပ် Tech မှလက်နက်များနှင့်အတူစိန်ခေါ်ဖွို!
သင့်ရဲ့စီးတီးကျွန်း Build နှင့်စီမံခန့်ခွဲ▶! ◀
သင့်ရဲ့သူရဲကောင်းများ, Gear ကိုများနှင့်လက်နက်များဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်စီးတီးကျွန်းအတွက်အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ရန်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ သငျသညျသုတေသနနှင့်အဆင့်မြှင့်ဘို့လိုအပ်တယ်အရင်းအမြစ်များကိုထုတ်လုပ်ရန် Landmark အဆောက်အဦးကိုတည်ဆောက်စေ။
Android အတွက် M.A.D 8 အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ M.A.D 8 apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, M.A.D 8 iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် M.A.D 8 ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ M.A.D 8 ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် M.A.D 8 ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!